रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोल र हवाइ इन्धन ढुवानी गर्न कठिन - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोल र हवाइ इन्धन ढुवानी गर्न कठिन
३१ बैशाख २०७५, सोमबार १०:०३ May 14, 2018 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, ३१ बैशाख । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि निर्माण हुन लागेको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेलमात्र ढुवानी गर्न सकिने देखिएको छ । प्राविधिक रूपमा अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न कठिन भएपछि डिजेलमात्र ढुवानी गर्न लागिएको हो ।
यसअघि डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्ने भनिए पनि प्राविधिक रूपमा समस्या देखिएकाले डिजेलमात्र ल्याउन सकिने नेपाल आयल निगमले बताएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पाइपलाइनबाट सबै पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न प्राविधिक रूपमा समस्या देखिएकाले डिजेल मात्र ल्याउने तयारी गरिएको बताए ।
“एउटा प्रडक्ट पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्दा साथ बीचमा सफा गर्न मटीतेल अनिवार्य पठाउनुपर्छ,” कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, “यसले गर्दा मटीतेलको आयात धेरै हुने र बजारमा माग न्यून रहेकाले पनि डिजेलमात्र ढुवानी गर्नुको विकल्प छैन ।” डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धन पाइपलाइनबाट ढुवानी गर्दा बीच–बीचमा छुट्याउनका लागि मटीतेल आयात गर्नुपर्ने भएकाले मटीतेलको आयात धेरै हुने उनको भनाइ छ ।
डिजेल आयात गर्दा बीचमा मटीतेल, पेट्रोल आयात गर्दा पुन मटीतेल र हवाई इन्धन आयात गर्दा पनि बीचमा मटीतेल आयात गर्नुपर्ने देखिएकाले पनि पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र ढुवानी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । डिजेलको खपत अत्यधिक बढेपछि आपूर्तिको अवस्था सहज बनाउन डिजेल मात्रै ढुवानी गर्न लागिएको हो ।
बजारमा कुल इन्धन खपतको ७० प्रतिशत डिजेलको खपत हुने गर्छ । डिजेलको खपत दिनप्रतिदिन बढ्दै गएकाले पनि ७५ प्रतिशत पाइपलाइनबाट आयात गर्दा बजारको माग धान्न सकिने भट्टराईको भनाइ छ । डिजेल मासिक १ लाख ५० हजार किलोलिटर, पेट्रोल ४० हजार किलोलिटर, र हवाई इन्धन १८ हजार किलोलिटर खपत हुनेगर्छ । पाइपलाइनबाट घन्टामा ३ सय किलोलिटर डिजेल ढुवानी गर्न सकिन्छ । दिनमा आठ घन्टा ढुवानी गर्दा २४ सय किलोलिटर ढुवानी गर्न सकिने निगमको भनाइ छ । पाइपलाइनबाट ढुवानी गरेको डिजेल अमलेखगन्जमा भन्डारण गरिन्छ ।
अमलेखगन्जमा डिजेल १९ हजार आठ सय र आठ हजार पेट्रोल भन्डारण गर्ने क्षमता छ । ८ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १० हजार किलोलिटर डिजेल भन्डारण क्षमता थप बढाउनुपर्ने निगमको भनाइ छ । पाइपलाइनबाट ढुवानी गरेको डिजेल, काठमाडौं, अमलेखगन्ज, पोखरा, वीरगन्ज, जनकपुर लगायतका जिल्लामा वितरण गरिने निगमको भनाई छ । निगमका अनुसार वार्षिक रूपमा डिजेल खपत २० प्रतिशत, पेट्रोल १२ देखि १५ , हवाई इन्धन १० र खाना पकाउने एलपीजी ग्यास १५ प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको छ ।
सीमा क्षेत्रको तुलनामा नेपालमा इन्धनको मुल्य सस्तो भएपछि तराइमा डिजेलको माग ह्वात्तै बढेको छ । निगमको तथ्यांकअनुसार प्रतिलिटर पेट्रोल २१ रुपैयाँ ९२ पैसा र डिजेल २४ रुपैयाँ ६१ पैसा सस्तो छ । भारतीय मालबाहक सवारी साधनहरू नेपालबाटै इन्धन भरेर जाने गर्छन् ।
नेपालमा सस्तो हुँदा भारतीय सवारीहरू पनि इन्धन भर्न आउने गरेका हुन् । बजारमा मटीतेलको माग १ हजार ५ सय किलोलिटरमात्र भएकाले पनि पाइपलाइनबाट डिजेलमात्र ढुवानी गर्न उपयुक्त रहेको निगमको भनाइ छ । पाइपलाइनबाट डिजेलमात्र आयात हुँदा गुणस्तरीय हुने निगमको दाबी छ । निगमका अनुसार हाल डिजेलको दैनिक मााग ५५ सय किलोलिटर छ । पाइपलाइन १० इन्च मात्रै भएकाले दैनिक १२-१५ घन्टा चलाँउदा पनि ८५ प्रतिशत मात्रै डिजेल आयात गर्न सकिन्छ ।
१ सय १५ अर्ब १० कराेड बेरुजुमा सरकार, कुन मन्त्रालयकाे बेरुजु कति ?
सरकारको नीतिप्रति पत्रकार महासंघले जनायो आपत्ती
एउटा छोराका लागि न्याय माग्दै अनसनमा गंगामाया, अर्का छोरा ज्यान मुद्दामा पक्राउ
अदालतभित्रै डा. केसीले प्रधानन्यायाधिशको यसरी उडाए धज्जी, पराजुलीले गम्भीर अपराध गरेको दावी
निगमले निकै जोड गरेर खरिद गरेका चिनियाँ जहाजको घाटा वार्षिक ३३ करोड ८४ लाख